Ny tsara indrindra any Bamberg
Eoropa Alemaina Munich & Bavaria
Top Attractions of Bamberg
Tanàna amperora misy Rauchbier malaza
Niorina an-tendrombohitra fito, toy ny tanàn-dehibe malaza iray , io tanàna Baviera io no anarana hoe "Franconian Rome". Sary lavorary manerana ny zoron-dalana rehetra, ny Bamberg Bavarian dia iray amin'ireo ivontoerana lehibe taloha ao Eoropa, izay fantatra amin'ny fomba ofisialy ho toy ny UNESCO World Heritage Site . Ny drafitra medaily, ny lalana mihodina ety sy ny trano fandraisam-bahiny dia ny fasana masina any Maorisy.
Fa ny tanàna dia mihoatra noho ny fiainana mahafinaritra ihany. Ny Université Bamberg dia mitondra mpianatra maherin'ny 10 000, ny mpikambana ao amin'ny tafika amerikana eo akaiky eo dia manana mpikambana miisa 4.000 ary miankina amin'ny fanjakana, ary efa ho 7000 avy any ivelany no monina eto. Amin'ny alin'ny faran'ny herinandro faran'ny herinandro, ny afovoan-tanàna dia potipotin'ny olona avy any ivelany.
Eto no hanombohana ny fitsidihanao ireo fito tsara indrindra any Bamberg, Alemana.
Miorina an-tsokosoko mialoha ny renirano Regnitz eo amin'ny nosy artifisialy, ny rindrin'ny tanàna taloha dia mifamatotra amin'ny sisin-tanin'i Bamberg amin'ny tetezana roa. Ny toerany mahatsikaiky dia mifototra amin'ny adihevitra miaraka amin'ny eveka izay tsy navela hipetraka tao an-tanibe ny tanan-dehibe ka nahatonga azy ireo hanana toeram-pialofana azo antoka hanapaka ny tanànany.
Ny tranobe dia voaravaka amin'ny hodgepodge of styles miaraka amin'ireo sary hosodoko tamin'ny lafiny roa izay mampiseho ny fomba namoronana ny Rathaus . Diniho ny trano fandroana trano, ny antsipiriany Baroque sy ny kerobima hafahafa. Ao anatiny, ny Kolontsaina Ludwig dia aseho amin'ny sarivongana sy ny porcelain malaza amin'ny taonjato faha-18.
Adiresy : Obere Brücke, 96047 Bamberg
Ora : Diory hatramin'ny Alahady 9:30 - 16:30
Avy any Altes Rathaus dia ahitanao ny faritra Klein-Venedig ("Little Venice") ao Bamberg. Io faritry ny mpanjono io dia mitahiry ny lokan'ny tanàna miaraka amin'ny tranom-behivavy manambana 14 ka hatramin'ny 17 metatra. Mandehana ny renirano mandroso izay manao ny dingana ho an'ny fetiben'ny Sandquerwa amin'ny volana Aogositra.
Adiresy : Am Leinritt 96047 Bamberg
Vaovao Residenz & Rosengarten
Jereo ireo elatra efatra an'ny New Palace miaraka amin'ireo trano 40 metatra maoderina namboarina tamin'ny tapakila faha-17 sy faha-18. Ao amin'ny Efitrano Imperialina dia misy sarin'ny emperora tsara tarehy 16. Io no toeran'ny eveka pretra Bamberg hatramin'ny 1802.
Miaraka amin'ny tanàna, Rosengarten barock (zaridaina) dia manana karazana raozy mihoatra ny 4.500 ary fomba fijery tsara kokoa amin'ny ambany Bamberg.
Adiresy: Neue Residenz, Domplatz 8, 96049 Bamberg
Ora : Daily; Aprily ka hatramin'ny Septambra 9:00 - 18:00 ary Oktobra hatramin'ny Martsa 10:00 - 16:00
Io katedraly io dia natsangana tamin'ny 1004, nodorana tamin'ny taonjato faha-11 sy 12 ary ny rafitra ankehitriny dia vita tamin'ny taonjato faha-13. Izy io dia mitaingina ny tanànan'i Altstadt ary mitazona ny fasan'ny Emperora Henry II sy Pope Clement II, izay fonosana papal tokana avaratr'i Alpes. Tadiavo ny sarivongana misterin'ny Bamberger Reiter teo am-piandohan'ny taona 12 izay maneho ny tandindon'ny tanàna ary miditra amin'ny iray amin'ireo fitsangatsanganana mivantana sy fitsangatsanganana.
Adiresy : Domplatz 5, 96049 Bamberg
Ora : Daily; Aprily - Oktobra 9:30 - 18:00 ary Novambra hatramin'ny 9ora hariva - 17:00
Ny tanàna dia fantatra amin'ny sehatr'ilay biriky ary Rauchbier tsy manam-paharoa (labiera sigara). Alao ny labiera miaraka amin'ny sivy amin'ireo biriky nentim-paharazana ary mandehana any amin'ny ivon-toerana mba hahazoany fankasitrahana ny afovoan-tanàna mendrika.
Adiresy : Toerana manerana an'i Bamberg
Ity monastera ity dia manome sary mahavariana ho an'ny zaridaina rose, na ho an'ireo mpitsidika izay manao ny fiarandalamby, toeram-pijerem-be any Bamberg. Niorina tamin'ny 1015 tamin'ny endriny barock, ny fiangonana dia naorina taorian'ny afo tamin'ny taona 1610 tamin'ny fomba neôgothika. Rehefa niditra ny fiangonana dia tadiavo ny "Garden of Heaven", sary hoso-doko iray misy voninkazo sy voninkazo 578.
Adiresy: Franziskanergasse 2, Bamberg
Horonantsary : Voasakana ho amin'ny famerenana amin'ny laoniny miaraka amin'ny famerenana indray ny fanokafana amin'ny 2021 amin'ny fotoana voalohany
Avy amin'i Reinhard Kirchner - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2588389
Eo akaikin'ny katedralina sy ny efitranon'ny Alte Hofhaltung (alàlan'ny kianja taloha), ny tranombakoka Bamberg dia mirakitra ny lafim- piainana manontolo ao an-tanàna ary koa ny fitaovana lehibe, fitaovana maoderina sy astronomie ary matematika. Amin'ny Krismasy , ireo mpitsidika dia hahita ny fanangonana sehatra nateraky ny natiora.
Adiresy: Domplatz 7, 96049 Bamberg
Ora : Talata hatramin'ny Alahady 9:00 - 17:00; Ny novambra ka hatramin'ny martsa dia misokatra ho an'ny fampiratiana manokana
Miorina eo amin'ny havoanan'i Bamberg avo indrindra, io rafitra ankehitriny io dia manomboka amin'ny 1109. Rehefa avy nandalo tompona maro sy vanim-potoana nandao ny trano, dia navaozina ilay trano ary efa misokatra ho an'ny fitsidihana sy ny hetsika.
Adiresy: Altenburger Strasse 115, 96049 Bamberg
Ora : mivoha isan'andro; Restaurant 11:30 - 14: 0o sy 18:00 pm - 21:15
Ahoana no hialana amin'i Meksika any Venise?
Ny dessert rehetra mila miezaka amin'ny Oktoberfest
Inona no tokony hatao any Berchtesgaden, Alemaina
Ny Oktoberfest any Munich
Ny fiaraha-mikorana tsara indrindra any Munich
5 amin'ireo Park RV tsara indrindra Washington
Manomàna Wedding Wedding
Ny fahatsapana an'i Santa Claus ao Okraina
Ny fiafaràn'ny fitsangatsanganana Cannabis
Ahoana ny fandehanana any Oslo mankany Trondheim
Inona no hividianana fitsangatsanganana any Seattle?
Torolalana ho an'ny Farihy Tahoe tsara indrindra
Etiquette Spa any Sina
Alaska 2018 - sambo mpitondra sambo lehibe sy midadasika
Toeram-pisakafoanana romantic any Durham, NC
Fialam-boly sy kolontsaina: Boky tena mahatalanjona momba an'i Afrika